प्रेरणा पत्र कसरी लेख्ने भन्ने बारे उपयोगी सुझावहरू
स्थान: घर » पोष्ट गर्दै » गेस्टपोस्ट » प्रेरणा पत्र कसरी लेख्ने भन्ने बारे उपयोगी सुझावहरू
13 मिनेट पढ्ने
यदि तपाइँ छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न र तपाइँको सपनाको विश्वविद्यालय वा कार्यक्रममा सामेल हुने मौका प्राप्त गर्न उत्सुक हुनुहुन्छ भने, तपाइँलाई प्रेरणा पत्र कसरी लेख्ने भनेर जान्नुपर्छ।
छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न प्रेरणा पत्र कसरी लेख्ने
आधुनिक संसारमा, प्रेरणा पत्रहरू कुञ्जीहरू हुन् जसले तपाईंको लागि धेरै ढोका खोल्न सक्छ। राम्रोसँग लिखित र रचनात्मक टुक्राले नियोक्ता, मानव संसाधन प्रबन्धक, वा परियोजना नेतालाई तपाईं पदको लागि उपयुक्त उम्मेद्वार हो भनेर मनाउन सक्छ। यदि तपाइँ छात्रवृत्ति कार्यक्रमको लागि आवेदन गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ कागजातहरूको मानक सेटमा यस्तो पत्र समावेश गर्नुपर्छ। यस्तो तरिकामा, तपाइँको आवेदन अनुमोदन गर्न को लागी, तपाइँलाई एक प्रेरणा पत्र कसरी लेख्ने र एक प्रतिनिधित्व गर्ने सबै भन्दा राम्रो विशेषज्ञहरुबाट सुझावहरू सिक्नु पर्छ। विश्वसनीय सेवा.
एक प्रेरणा पत्र के हो?
धेरै आधारभूत सर्तहरूमा, एक प्रेरणा पत्र छात्रवृत्ति वा नौकरी आवेदन प्याकेजमा समावेश गर्न को लागी एक आवरण पत्र हो। यसले दुई मुख्य लक्ष्यहरू पछ्याउँछ:
तपाईं किन उत्कृष्ट उम्मेद्वार हुनुहुन्छ पाठकलाई मनाउन;
विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्ने वा कम्पनीमा सामेल हुने आफ्नो मनसायलाई व्याख्या गर्न।
यो छोटो लेखन प्राथमिक महत्वको छ। सामान्यतया, भर्ना बोर्डहरूले आवेदकहरूको सूचीलाई प्रोत्साहन पत्रहरू मात्र छनोट गरेर छोटो पार्छन्। बाँकी के होला ? केही छैन! बोर्डले अन्य उम्मेदवारहरूलाई मात्र पास गर्नेछ। यदि तपाइँ यसलाई सर्टलिस्टमा बनाउन आवश्यक छ भने, एक अद्भुत र ध्यान आकर्षित गर्ने व्यक्तिगत कथन विकास गर्नुहोस् र यसलाई आवेदन फारमको साथ पेश गर्नुहोस्।
यदि तपाइँ स्नातक स्तरको छात्रवृत्तिको लागि आवेदन गर्नुहुन्छ भने, एक प्रेरणा पत्र आवश्यक छ। स्नातकहरूको लागि समान विशेष कार्यक्रमहरूले विद्यार्थीलाई यस्तो कागज पेश गर्न आवश्यक छ। यदि तपाईलाई थाहा छैन कि छात्रवृत्ति आवेदनमा प्रेरणा पत्र समावेश गर्ने वा नगर्ने, जवाफ सधैं एउटै हुन्छ, "हो, तपाईले गर्नुपर्छ!" समीक्षा समितिलाई प्रभाव पार्ने र केही अतिरिक्त अंकहरू जित्ने यो एउटा अनौठो मौका हो।
यस लेखले तपाइँको सपनाको कलेज वा विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न प्रेरणा पत्र कसरी लेख्ने भनेर छलफल गर्दछ। तर सुरुबाट सुरु गरौं!
चरण 1. ढाँचा चयन गर्नुहोस्
एक प्रेरणा पत्र एक मानक तीन-भाग संरचना पछ्याउँछ, जस्तै एक निबन्ध। तपाईंले पहिलो अनुच्छेदमा केही परिचयात्मक लाइनहरू लेख्नुपर्छ, दोस्रोमा उद्देश्य वर्णन गर्नुहोस्, र अन्तिम अनुच्छेदमा सम्पूर्ण विषयलाई संक्षेप गर्नुहोस्। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं प्रवाहमा रचना गर्न सक्नुहुन्छ। यो नीरस लेखनले तपाईलाई अपमान गर्न सक्छ। यस्तो पत्र पाठकको लागि बोरिंग र भ्रमित हुन सक्छ।
पाँच-सात अनुच्छेदहरूको प्रेरणाको पत्र:
तपाईंले आफ्नो उद्देश्यको पत्रलाई पाँच देखि सात अनुच्छेदहरूमा व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ। यो ढाँचा सबैभन्दा प्रभावकारी छ। यसले तपाइँका विचारहरूलाई तार्किक र बुझ्ने तरिकामा प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छ। फेरि, तपाईंलाई परिचयको लागि एउटा अनुच्छेद र निष्कर्षको लागि एउटा अनुच्छेद चाहिन्छ। शरीरले प्रत्येक आवेदन लक्ष्यलाई छुट्टै अनुच्छेदमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। सीमालाई ध्यानमा राख्नुहोस्। तपाईंले आफ्नो सबै विचारहरू अधिकतम पाँच अनुच्छेदहरूमा फिट गर्नुपर्छ।
चरण ३ ब्रेनस्टर्म
तपाईले स्पष्ट रूपमा बुझ्नु पर्छ कि प्रवेश बोर्डले खोजिरहेको छ। अर्को, तपाईंले एक सिद्ध उम्मेद्वारको छविसँग मेल खानुहुन्छ वा होइन भनेर हेर्नको लागि वस्तुगत आत्म-मूल्याङ्कन सञ्चालन गर्नुपर्छ। एक दिमागी सत्र उपयोगी हुन सक्छ। तपाईले विश्वास गर्नुहुने साथी वा व्यक्तिलाई पनि आमन्त्रित गर्न सक्नुहुन्छ, जसलाई तपाईको सीप, व्यक्तिगत विशेषताहरू, शैक्षिक उपलब्धिहरू, र व्यावसायिक सफलताहरू बारे थाहा छ। सत्रको लागि, तपाइँ निम्न प्रश्नहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ:
तपाई कुन पाठ्यक्रम रोज्न चाहनुहुन्छ?
छनौट गरिएको पाठ्यक्रमले तपाइँको दीर्घकालीन योजनाहरूको कार्यान्वयनमा तपाइँलाई कसरी मद्दत गर्न सक्छ?
तपाईलाई छात्रवृत्ति किन चाहिन्छ?
के तपाइँ एक अद्वितीय उम्मेद्वार बनाउँछ?
अहिलेसम्म के उपलब्धि हासिल गर्नुभयो ?
अहिलेसम्म के योगदान दिनुभएको छ ?
यदि तपाइँको छात्रवृत्ति आवेदन स्वीकृत भयो भने तपाइँ के गर्न जाँदै हुनुहुन्छ?
कसरी छात्रवृत्तिले तपाईंलाई आफ्नो लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्छ?
कसरी छात्रवृत्तिले तपाईंलाई समाजमा योगदान गर्न मद्दत गर्न सक्छ?
चरण 3: पहिलो उत्तम होइन: ड्राफ्टहरूसँग काम गर्नुहोस्
यदि तपाइँसँग न्यूनतम लेखन अनुभव छ भने, विचार गर्नुहोस् कि तपाइँले पहिले लेख्नु भएको कुनै नराम्रो मस्यौदा कहिल्यै पेश गर्नु हुँदैन। यो कुनै कडा नियम होइन तर आत्म-स्पष्ट सिद्धान्त हो। पेपरलाई दोस्रो हेराई दिनुले यसलाई कसरी परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर बुझ्न मद्दत गर्न सक्छ। यदि तपाइँसँग तपाइँको पत्र सुधार गर्ने मौका छ भने, यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईंले मस्यौदामा फर्कनु अघि एक वा दुई हप्ताको विश्राम लिनु लाभदायक हुन सक्छ। यो छोटो अवधिले तपाइँलाई तपाइँको शक्ति नवीकरण गर्न र तपाइँको प्रेरणा पत्रलाई नयाँ जोसका साथ लेख्नमा फर्कन अनुमति दिन्छ। आफ्नो भावना र प्रवृत्ति विश्वास गर्नुहोस्। अन्ततः, प्रेरणा पत्र लेखन कला र प्रेरणा को बारे मा सबै हो। यो एकदम सम्भव छ कि तपाइँ एक योग्य टुक्रा संग आउनु अघि तपाइँ तीन वा बढी ड्राफ्टहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। फेरि, पहिलो मस्यौदा पेश गर्नु हुँदैन। यो त त्यत्तिकै हो । बरु सुधार गर्नुपर्छ ।
चरण 4: ब्यालेन्स स्ट्राइक गर्नुहोस्
अर्को सामान्य गल्ती यस्तो छोटो निबन्धमा आफ्नो सम्पूर्ण जीवन निचोड गर्ने प्रयास गर्दैछ। तपाईंले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ कि यो जटिल छैन तर असम्भव छ। तपाईको जीवन एक पृष्ठ भन्दा धेरै ठूलो छ। तनाव र भ्रमबाट बच्नको लागि, तपाईंको जीवनीमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माइलस्टोनहरू निर्धारण गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तिनीहरूले भर्ना बोर्डलाई तपाईं को हुनुहुन्छ र तपाईंले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर बुझ्न मद्दत गर्न सक्छन्। तपाईंको पत्र तार्किक र स्पष्ट हुनुपर्छ। इमानदार र व्यक्तिगत हुनुहोस् तर घनिष्ठ नहुनुहोस्। तपाइँको पत्रले तपाइँको व्यक्तित्व, कौशल, महत्वाकांक्षा, र रचनात्मकता, साथै बक्स बाहिर सोच्ने क्षमता, रचनात्मक हुनुहोस् र विश्लेषण गर्न को लागी प्रदर्शन गर्नुपर्छ। एउटा जीवन परिवर्तन गर्ने घटनाको बारेमा सोच्नुहोस् र कथाको विकास गर्नुहोस्। सन्तुलन मिलाउन सजिलो छैन। कागज योजनाको बारेमा सोच्न पर्याप्त समय खर्च गर्नुहोस्।
चरण 5. एउटा निष्कर्ष लेख्नुहोस्
तपाईंको प्रेरणा पत्रको अन्तिम अनुच्छेदले सम्पूर्ण कथालाई समेट्नु पर्छ। निष्कर्षमा, तपाईंले प्रमुख मुद्दाहरूलाई जोड दिनुपर्छ र आफ्नो व्यावसायिक लक्ष्य र योजनाहरू जोड्नु पर्छ। यहाँ, यो आफ्नो भविष्य को एक उज्ज्वल छवि कोर्न उपयुक्त हुनेछ। तपाइँलाई किन छात्रवृत्ति चाहिन्छ भनेर फेरि तनाव दिनुहोस्, जसको लागि तपाइँ आवेदन गर्नुहुन्छ। तपाईंले तिनीहरूलाई आफ्नो सपनाको कामको बारेमा केही बताउन सक्नुहुन्छ। तपाईंले दिमागमा राख्नु पर्छ कि लेखनको यो टुक्राले तपाईंको लागि धेरै शैक्षिक अवसरहरू खोल्न सक्छ।
चरण 6: पढ्नुहोस्, प्रूफरीड गर्नुहोस्, सुधार गर्नुहोस्; दोहोर्याउनुहोस्
अन्तिम चरणमा, तपाईंले आफ्नो प्रेरणा पत्र पोलिश गर्न आवश्यक छ। साथै, तपाईंले केही साथीहरू, साथीहरू, वा सहकर्मीहरूलाई कागजमा हेर्नको लागि सोध्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूको प्रतिक्रियाले पेपरलाई समग्र रूपमा सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छ। तपाईंले जति धेरै मानिसहरू संलग्न गर्नुहुन्छ, तपाईंले सबै गल्तीहरू हटाउने सम्भावनाहरू उति धेरै छन्। तपाईले स्वचालित हिज्जे जाँचकर्ताहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र गर्नुपर्दछ (केही बारे) तर तपाईलाई थाहा हुनुपर्दछ कि तिनीहरूले प्रत्येक गल्ती समात्न सक्दैनन्। साथै, तिनीहरूले तपाईंलाई मानव परिप्रेक्ष्य दिने छैनन्। आखिर, तपाईं मानिसहरूका लागि लेख्दै हुनुहुन्छ, मेसिनहरू होइन। पाठकहरूलाई तपाइँको पत्रको सामान्य छाप साझा गर्न सोध्नुहोस्। सोध्नुहोस् कि उनीहरूले तपाईंलाई विश्वास गरे वा गरेनन्, विषय र सन्देश स्पष्ट थिए वा थिएनन्, र उनीहरूले कुनै क्लिच वा पूर्वाग्रह देखे कि थिएनन्। तिनीहरूलाई कागजको सबैभन्दा कमजोर पक्षको बारेमा सोध्नुहोस्।
नकारात्मक प्रतिक्रिया देखि नडराऊ। यो सबैभन्दा उपयोगी हुन सक्छ। यस्तो तरिकाले, तपाइँ सबै कमजोर लिङ्कहरू पत्ता लगाउन र तिनीहरूलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। अन्तमा, तिनीहरूलाई सोध्नुहोस् कि पत्र परिचित छ वा छैन। यदि जवाफ 'हो' हो भने, हामीसँग केही नराम्रो खबर छ। यसको मतलब तपाईं आफ्नो व्यक्तित्व प्रदर्शन गर्न असफल हुनुभयो। कुनै आतंक छैन! केहि हराएको छैन! तपाईं अझै पनि पत्र सुधार गर्न र यसलाई सही बनाउन सक्नुहुन्छ।
हामी आशा गर्छौं कि यो लेख पढिसकेपछि, तपाईंले प्रेरणा पत्र कसरी लेख्ने भनेर बुझ्नुभयो। अब, तपाईं व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ! भाग्यले साथ दिओस्!
थप मा: प्रेरणा
Spotify पदोन्नति नयाँ सुन हो!
के तपाईंको सुविधा प्रबन्धक प्रमाणित हुनुपर्छ?
पुरानो दुखाइ मा भर्चुअल वास्तविकता को प्रभाव मा नयाँ अध्ययन
सेशेल्स मुस्कुराउने 100,000 कारणहरू
इटालीमा सांस्कृतिक पर्यटनले ठूलो समय फर्काउनेछ
ग्रहमा विदेशीहरूलाई स्वागत गर्न नयाँ दूतावास...
स्यान्डल रिसोर्ट्स इन्टरनेशनलले अन्वेषण भ्रमण...
अरेबियन ट्राभल मार्केट आधिकारिक रूपमा खुला छ
सौर्य तापले मंगल ग्रहमा धुलोको आँधी आउन सक्छ
विजयको लागि सहयोग गर्नुहोस्: श्रीमा ठूलो भारत सम्मेलन...
वयस्कहरूमा उन्नत प्रोस्टेट क्यान्सरको नयाँ उपचार
IGLTA पोस्ट-प्यान्डेमिक LGBTQ+ यात्रा सर्वेक्षणले CETT प्राप्त गर्यो...
ग्लोबल कम्बी ओभन बजार साक्षीको लागि अपेक्षित छ ...
मधुमेह खुट्टा अल्सर को लागी नयाँ औषधि
ग्लोबल STD बजार USD 256 बिलियन मा वृद्धि हुनेछ
पर्यटन सेशेल्सले GCC सँग महत्त्वपूर्ण सम्बन्धलाई बलियो बनाउँछ
महिलामा एन्ड्रोजेनेटिक एलोपेसियाको नयाँ उपचार...
पाचन इन्जाइम पूरक बजार- आउटलुक अन...
क्यारिबियन पर्यटन संगठनले नयाँ नाम...
शान्ति, कूटनीतिको लागि SKAL अन्तर्राष्ट्रिय आह्वान...
ग्लोबल डेयरी प्रशोधन उपकरण बजार आकार छ ...
शीर्ष इटालियन टूर अपरेटरहरूले सुन्दर अनुभव...
मेटास्टेटिक ग्रीवा क्यान्सर उपचार अब स्वीकृत
विश्व पर्यटन नेटवर्क द्वारा मे 1 कथन
लुफ्थान्सा र युरोविङ्स डिस्कभरले विशेष उडानहरू प्रस्ताव...
युएई, साउदी अरेबिया, इजिप्ट, र...
युइएफएले च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा रसियालाई हटाउन सक्ने...
अलपत्र ह्वेलको चमत्कारी उद्धार
अमेरिकी अनिवार्य प्रि-डिपार्चर परीक्षणको लागि प्रमुख अवरोध...
पृथ्वी दिवस २०२२ मा दिगो फेसन मनाउँदै
बाल मस्तिष्क विकास मा सामाजिक मिडिया को प्रभाव
उनी लेख्न मन पराउँछन् र विवरणहरूमा धेरै ध्यान दिन्छन्।